Mividy ny vokatra eo an-toerana ny Ejypsiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2018 4:18 GMT
(Lahatsoratra efa tamin'ny volana Janoary 2009)
Nanapa-kevitra “hanao ankivy ny ankivy” sy handray izany amin'ny fiitarany tsara kokoa i Inji, bilaogera mirangorango sady tanora mpahay toekarena izay kivy noho ny mailaka sy hafatra SMS marobe ary mitaky ny hanaovana ankivy vokatra maromaro. Manolotra tetikasa fitariham-pirenena amin'ny mpamakiny izy izay ametrahany tsotra izao ny Buying Egypt Back [mividy hamerenana an'i Ejipta]. Ao amin'ny tolo-keviny i Juka milaza hoe:
“Andao hividy vokatra Ejipta! Andao hividy vokatra Arabo. Na tsara kokoa andeha hamokatra vokatra Arabo. Mandehana mankany amin'ny toeram-pivarotana eo an-toerana misy anao ary jereo hoe firy isanjaton'ny vokatra novidinao no namboarina teto an-toerana. Avy eo, eritrereto ny momba ny fanapahan-kevitrao hividy entana, nosoloinao marika manerantany ve ireo eto an-toerana? Fantatro fa be loatra ny fanontaniana, ary eny, hahatsiaro ny kafe, dite sy ny fihinanana sakafo ankafizinao mihitsy ianao. Ho amin'ny fiovana. Andao isika hitsinjo ho mavitrika. Andao hividy vokatra Ejypta! “
Samy nafana fo tamin'ny tetikasa ireo mpamaky ny bilaogin'i Inji, satria maniry fiovana ny tanora Ejiptiana, ary mbola mino ny firoboroboan'ny fireneny izy ireo.
Jessy namorona ny fango Arabo ho an'ny fanentanana nilaza hoe:
“* Tehafo mafy tokoa* halako ireo hafatra fanaovana ankivy. Voalohany indrindra satria tsy tiako ny lazaina amin'izay tokony atao sy miezaka manao izany. Faharoa, ny ankamaroan'ny mailaka fanaovana ankivy dia tsy mahafantatra akory raha manampy na tsia amin'izany ireo orinasa.
Momba ny fividianana vokatra Ejiptiana, izany indrindra no ilaintsika. Mila izany ny toekarentsika na inona na inona mitranga any amin'ny faritra hafa manerana izao tontolo izao ary rehefa takatsika fa ilaintsika ny manampy ny tenantsika alohan'ny hianteherana amin'ny hafa mba hanampy antsika, dia ho eny amin'ny lalan'ny fanatsarana isika no hiafarantsika
Ny hafa kosa nisalasala:
Will E izay nanohana ny hevitra kosa mbola mino fa manana olana tsara jerena izahay:
“Tsara ilay hevitra raha ara-toeria, ary nieritreritra izany imbetsaka aho. Manintona izany ary izaho manokana dia manohana izany, ary vonona ny hijaly kely aho fa aoka kosa aho ho feon'ny fieritreretana. Ny fividianana vokatra Ejypsiana dia midika fanohanana ireo orinasa rehetra izay mamitaka amin'ny fitaovana, kalitao sy ny singa ary milaza azy ireo fa eny tsy mila mianatra ny fomba hahomby ianao, tsy mila mianatra ny fomba hanomezana tolotra tsara ianao, hividy ny vokatrareo izahay na izany aza ary azoanreo ny mandraoka vola.
Nahoana ny Ejiptiana no mampiakatra ny vidin-javatra rehetra eo an-toerana sy ny vokatra nafarana, na dia efa mihena aza ny fandaniana amin'ny famokarana? Te-hividy vokatra Ejypsiana aho no valinteny … tena manao izany aho. “
Dee nanampy hoe:
“Mora lazaina fa sarotra tanterahina ry Juka, nahita ny kalitaon'ny vokatra resahana ve ianao? Maniry aho mba ho safidy izany, saingy tsy izany ary mifototra amin'ny fitsarana izany fanambarana izany! Mampanantena anao hanandrana indray, saingy tsy ambony ny fanantenako (ary efa fantatrao fa tsy tia marika vahiny aho, sa tsy izany? “
Namaly ireo mpisalasala avy eo i Juka ary nandeha tamin'ny fahazarany andavanandro, izay nandaharany ka nahatongavany amin'ireo vokatra hafa ao an-toerana nanana ny fahatsarany.
Tamin'ny farany, niangavy ireo mpamaky azy i Inji mba hijery ny lafy tsara:
“Andeha hifantoka amin'ireo lafiny tsara ary hiasa hamantatra ireo mpisava lalana ao anatin'ny maizina”.
Nanomboka ny ezaka ary hiasa toy izao manaraka izao, hoy Juka:
“1) Fanasana ho an'ny rehetra sy izay hanomboka ao an-toerana (Arabo) amin'ny fanapahan-kevitr'izy ireo rehefa hividy zavatra izany.
2) Isan-kerinandro ato amin'ity toeram-pivarotana ity, handefa tantaranà fahombiazan'ny Ejipsiana/Arabo aho na ny fitarainan'ny mpanjifa mitodika mivantana any amin'ny orinasa eo an-toerana. Aza misalasala manomboka mandefa mailaka aty amiko.